samira 10th September 2016
samira 9th September 2016
Rabitaankii Nafteyda Part 162
samira 8th September 2016
Warka 08 09 2016 Amisom & Jubaland oo Shabaab kala wareegay deegaano horleh.
Rabitaankii Nafteyda Part 161
samira 7th September 2016
Rabitaankii Nafteyda Part 160
samira 6th September 2016
Warka 06 09 2016 Qaadka la joojiyay oo si weyn Muqdisho looga dareemay.
Warka 05 09 2016 Hub & qalab Al Shabaab laga qabsaday oo lasoo bandhigay.
samira 4th September 2016
Warka 04 09 2016 M. Xasan oo saxiixay heshiiska axsaabta siyaasadeed ee Soomaaliya.
Rabitaankii Nafteyda Part 157
samira 3rd September 2016
Faaliyaha Qaranka 03 09 2016 Nimca Ilaahey keenay oo dowlada Jabuuti ay shacabka ugu bishaareysay.